कुलमानको छायाँमा लटपटिएको ओली प्रवृत्ति - नेपालबहस
कुलमानको छायाँमा लटपटिएको ओली प्रवृत्ति
१ अषोज २०७७ | १५:३७:४७ मा प्रकाशित
१ असोज, काठमाडौं । यतिबेला दुई व्यक्ति चर्चाको शिखरमा छन् । एक डा. युवराज खतिवडा र अर्का कुलमान घिसिङ । दुवैको चर्चा भएपनि समानता भने पाइँदैन । डा. खतिवडा प्रधानमन्त्रीको चहेतामा परेकाले चर्चित भएका हुन् भने घिसिङ आम नागरिकको रुचीको पात्र भएर ।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बहिर्गमनमा पर्दा धेरै नाखुस भएनन् तर घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता नपाउँदा चित्त कुँढियो । स्वर्तस्फूर्त मानिस सडकमा ओर्लिए । त्यहाँ घिसिङले कुनै खर्चबर्च दिएर पठाएका मानिस थिएनन् ।
घिसिङ राजनीति गर्न उद्यत् छैनन् । उनको अभिष्ट नेतागिरी पनि होइन । उनी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने इमान्दार राष्ट्रसेवक मात्र हुन् । त्यही इमान्दारीले नै उनको छवि पचासौं वर्ष राजनीतिमा बिताएको नेता भन्दा उँचो बनाइदियो । तर नेतागिरी गर्नेका लागि त्यो सुपाच्य भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई घिसिङको लोकप्रियताले नराम्री घोचेको छ ।
उनको कार्यकाल बढाउन उर्जा मन्त्री वर्षामान पुनले लगेको प्रस्ताव ओलीले कानून बमोजिम हुने भनेर टारिदिए । कानून बमोजिम भनेको सायद खुला प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ भन्ने होला । तर उनै ओलीले त्यही प्रकृतिको रेलवे संस्थानमा भने गुरु भट्टराईलाई सोझै नियुक्त गरे । निकम्मा सावित डा. खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे ।
त्यो शंकाको लाभ ओलीलाई दिन सकिन्छ । तर ओली सरकारको कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो तिलश्मी नेतृत्व खोज्लान् भन्ने लाग्दैन । बरु कमिसनको थैली नबुझाएकाले नै कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा आनाकानी गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छ ।
कुलमान घिसिङले वर्षाैं घाटामा गएको प्राधिकरणलाई चार वर्षे कार्यकालमा कायापलट गरिदिए । हुन त यो सबै काकताली परेको होला । तर भयो उनकै कार्यकालमा । भारतबाट विद्युत् किन्ने सम्झौता पावर पर्चेचिङ एग्रिमेण्ट तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा भएको थियो ।
त्यही विजुली किनेर व्यवस्थापन गरेका थिए कुलमानले । उनकै चारबर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणले अचम्मकै छलाङ मारेको हो । दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट एक्कासी लोडसेडिङमुक्त बनाउने श्रेय उनलाई नै जान्छ । तर यो यथार्थ पचाउन ओलीको टिम तयार छैन । उल्टो व्यक्तिगत प्रचार गरेको लाञ्छना कुलमानप्रति लगाइयो । त्यसैले कुलमानको पुनर्नियुक्ति ओलीका लागि रुचीकर भएन ।
हुन त ओलीले कुलमान भन्दा योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई प्राधिकरणमा ल्याउने तयारी गरेका होलान् । त्यसैले कुलमान बिना प्राधिकरण चल्दैन भन्न नमिल्ला । त्यो शंकाको लाभ ओलीलाई दिन सकिन्छ । तर ओली सरकारको कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो तिलश्मी नेतृत्व खोज्लान् भन्ने लाग्दैन । बरु कमिसनको थैली नबुझाएकाले नै कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा आनाकानी गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छ ।
नत्र कुलमानले त व्यवहारबाटै आफूलाई कुशल व्यवस्थापक भएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । अब उनलाई फेरि प्रतिस्पर्धाको नाटक रचेर ल्याउनुपर्ने दरकार नै छैन । त्यो त केवल देखाउने दाँत मात्रै हो । तर ओली जस्ता शासकका लागि कुलमान जस्ता इमान्दार व्यवस्थापक काउछो हुन्छन् । जनस्तरबाट कुलमानको प्रशंसा हुँदा ओलीहरुलाई भत्भती पोल्ने गर्छ ।
ओलीको शैली र प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ, कुलमानसँग उनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । जबकी कुलमान कसैले बोकेर बनाइएका होइनन् । त्यसको दरकार डा. खतिवडाहरुलाई पर्ला । तर कुलमान “सेल्फ मेड” हुन् । त्यस्ता क्षमतावान मानिसलाई खोजेर सरकारले काममा लगाउनुपर्ने हो ।
माइतीघर मण्डलामा भाडामा नाराबाजी गराउने बानी परेका ओलीहरु कुलमानका पक्षमा समेत आफूजस्तै अनुमान गर्छन् । तर नागरिक समाज कुलमानप्रति आश्वस्त र विश्वस्त छ । हिजो व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिसकेका कुलमानले अझै केही गर्छन् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ । उज्यालो नेपाल अभियानका नायकका रुपमा उनलाई लिइएको छ । यद्यपि उनले आफ्नो सफलतालाई कहिल्यै व्यक्तिगत खातामा राखेनन् । सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई जस दिएका छन् । तर ओलीका लागि त्यो पाच्य भएन । किनभने कुलमानले ओलीको जस्तो सेटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने हावादारी गफ दिएनन् । बरु राम्रो व्यवस्थापन गरिदिए ।
जनताप्रति इमान्दार सरकारले राम्रो जनशक्तिबाट सेवा प्रदान गर्छ, न की उसको इश्र्या । ओलीको शैली र प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ, कुलमानसँग उनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । जबकी कुलमान कसैले बोकेर बनाइएका होइनन् । त्यसको दरकार डा. खतिवडाहरुलाई पर्ला । तर कुलमान “सेल्फ मेड” हुन् । त्यस्ता क्षमतावान मानिसलाई खोजेर सरकारले काममा लगाउनुपर्ने हो ।
ओली उल्टो दिशातिर हिंडेका छन् । कुलमानलाई तह लगाएर जनता तर्साउने खतरनाक खेल खेल्दै छन् ओली । कदाचित ओलीले फेरि कमिशनको आडमा बिचौलियालाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा लगाएभने जनस्तरमा अर्काे ज्वारभाटा उठ्न सक्छ ।
डा.युवराज खतिवडा जस्तो कमजोर धरातल भएको व्यक्ति देखिएनन् कुलमान । त्यसको हेक्का राख्ने काम ओली सरकारको हो । सकेसम्म छिटो कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा लगाउँदा मात्रै जनमतको कदर हुने देखिएको छ ।
संसदको विशेष अधिवेशन तत्काल आव्हान गर्न कांग्रेस नेता केसीको माग १ दिन पहिले
संविधान दिवसमा भ्रष्टाचार शिरोमणिहरू नै विभुषणबाट सम्मानित १ दिन पहिले
बाहुबली र कटप्पा बन्दै त छैनौं ? १ दिन पहिले
प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रहरी सम्बन्धमा कति छिट्टो ‘डवल स्याण्डर’ १ दिन पहिले
नेताहरुबीच सहमति नजुट्दा सचिवालय बैठक स्थगित ३ दिन पहिले
अब सिटमा एक जना मात्र यात्रु, चढ्दा र ओर्लदा अनिवार्य स्यानिटाइजर ३ मिनेट पहिले
आईपीएल डेब्युमै शानदार अर्धशतक बनाउने देभदुत २४ मिनेट पहिले
किशोरकिशोरी उमेरकालाई बढी मानसिक समस्या २६ मिनेट पहिले
जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै ३३ मिनेट पहिले
कट्टर दुस्मन भिडाललाई हासेरै बिदाई गरे मेस्सीले ३६ मिनेट पहिले
युवाको सक्रियतामा शुरु भयाे फेवाताल सफाइ अभियान ५३ मिनेट पहिले